Icheku egosiputa parrot ya ohuru, Swing and Mambo | Akụkọ akụrụngwa
Parrot na-enye ụmụ obere ihe ọhụrụ ya, Swing na Mambo, anyị na-egosi gị ha
Miguel Hernandez | | Robotics, Technology
Taa ka enyere ndi obere minista nke Parrot a ma ama. Minidrones ndị a nwere aha nwere ọtụtụ ihe ha pụtara, Swing na Mambo dị mfe njikwa nke na ha dị ka ịgba egwu n'echiche nke okwu ahụ. Umu obere oru ohuru abuo a nwekwara njiri mara nke mere ka ha puru iche na ahia, ya na iji aka ahia ahia ahia ahia. Swing na Mambo lekwasịrị anya na ndị na-ege ntị dị iche na n'otu oge ahụ, na ebumnuche nke inye ọ funụ na-enweghị atụ, drones maka ndị ọrụ niile, ọkachamara kachasị na novice, echefula njirimara nke ngwaahịa Parrot ọhụrụ a.
Ntughari ohuru nke minidrones ntụrụndụ site na Parrot abia aka na ntinye nke uzo ozo di nkpa abuo; Nke mbụ bụ ngwa maka ekwentị mkpanaaka nke a ga-amara dị ka FreeFlight Obere; N'aka nke ọzọ anyị nwere Icheku Flypad, ihe ohuru ohuru iji jikwaa Parrot minidrones, nke nwere otu narị percent gamer aesthetic, ya bụ, o yiri ka ọ bụ iji mepụta ihe nkasi obi kama iji ụgbọelu na-anya ụgbọ mmiri, nke a bụ ihe na-eme ka ahụmịhe nke ịkwọ ụgbọ elu na-aghọ egwuregwu zuru ezu. , maka ndị niile na-ege ntị.
1 Icheku swing: vasatail, maka ndị mbido na ahụmịhe
2 Icheoku Mambo: Gbaa, jide na ofufe na nke a kediegwu minidron
3 Parrot Flypad, onye njikwa njikwa maka minidrones anyị
4 Parrot Freeflight Mini, ngwa dakọtara
Icheku swing: vasatail, maka ndị mbido na ahụmịhe
Mmiri a dị oke mkpa, minidron mbụ na-efepụ ma kwụdata, dị ka quadcopter ọ bụla, mana o nwere ikike iji ụgbọ elu fegharị dị ka ụgbọ elu. Naanị patrot patrot a na-eme ka ọ bụrụ ngwaahịa na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ozugbo anyị n'ọrụ na "ụgbọelu" mode Ọkpụkpụ Parrot nwere ike iru ọsọ ọsọ ruo 30 km / h, ọsọ ọsọ ọsọ ma ọ bụrụ na anyị echee na a na-ewere drone a dịka ihe egwuregwu, n'eziokwu, anyị ga-ahụ ya n'ọtụtụ ụlọ ahịa ụmụaka.
Njirimara ndị a na-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche ga-eme ka anyị nwee usoro stunts na nnukwu ọsọ, ebe ọkụ ya (naanị 73g) nwere ọtụtụ ihe ọ ga-eme. Ngwaọrụ nwekwara onye na-anya ụgbọelu na-akpaghị aka site na ihe mmetụta ya (accelerometer na gyroscope) na igwefoto ya. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na anyị rụọ ọrụ «quadcopter» mode na nke a vasatail drone, ihe mmetụta ultrasound ga-enyocha elu ụgbọ elu ma nyochaa ya ekele ọrụ ya n'aka ya na ihe nrụgide nrụgide. Nke a ga - echekwa anyị nsogbu na drone ahụ, ọ ga - emekwa ka anyị nwee ike ịhazi oke elu nke anyị chọrọ iji fee ụgbọelu, ọ bụrụ na anyị emee ọrụ ụgbọ elu ime ụlọ.
Mmiri a nwere nnwere onwe nke ihe dị ka 8 nkeji ụgbọ elu, na batrị gị ga-akwụ ụgwọ ihe dịka 25 nkeji. Ọ bụ ugbua na ere na pụrụ iche ihe na ukara ụlọ ahịa nke Parrot maka € 139. Ọ ga-agụnye Parrot Flypad.
Icheoku Mambo: Gbaa, jide na ofufe na nke a kediegwu minidron
Minidron a nwere anya Machiavellian nwere ike iwetara anyị ifuru ma ọ bụ gbaa anyị ajọ njọ, ihe niile dabere na ịba uru anyị chọrọ inye ya. Nke a bụ nke mbụ obere drone nwere ngwa na ahịa. Ndị a bụ ngwa ndị enyere na ịzụta:
Cannon: Onye na-agba ụta nwere ọtụtụ ihe ruru 2m, yana akwụkwọ akụkọ ruru 6 bọọlụ PVC.
Gripper: A usoro nke clamps na-ekwe ka na-akwado ihe nke ruru 4 grams.
N'aka nke ọzọ, Parrot Mambo a na-enye ohere nke ịzụta ọkụ ọkụ ọkụ abụọ na-acha ọcha. Site na ngwa mkpanaka anyị nwere ike ilekwasị anya, zipu akara ma gbanwee oke ahụ, ọnụ ahịa ya ga-abụ € 15.
Ma anyị anaghị anọ ebe a, icheoku Mambo Swing na Mambo dị mfe njikwa nke na ha dị ka ịgba egwu n'echiche nke okwu ahụ., na-enye gị ohere ịme ụdị nkwanye ugwu niile ma nwee nkwụsi ike ụgbọ elu pụrụ iche na-ekele ya accelerometer na gyroscope. Dị ka Parrot Swing, o nwere igwefoto na-enye gị ohere ịse foto ma chekwaa ha na ebe nchekwa 1GB nke minidron nwere. Ultrasound na sensọ nrụgide dịkwa na nnyefe a, na-eme ka ụgbọ elu na-atọ ụtọ yana nchekwa.
Parrot Mambo ga-enwe ikike ruru ihe ruru nkeji iteghete, ọ ga-akwụkwa ihe dịka ọkara elekere. Ọnụahịa mkpọsa ya bụ 119 € (ya na ngwa abụọ ahụ gụnyere) ma enwere ike zụta ya na isi ahịa ọrịre yana yana ụlọ ahịa weebụ Parrot.
Parrot Flypad, onye njikwa njikwa maka minidrones anyị
El Icheku Flypad es iwu enyere maka anyi inwe ezigbo oge na-egwu obere obere anyị. O nwekwara ụdị a Ike ala Bluetooth Parrot, nke nwere ihe ruru 60 mita, ya mere ha dakọtara na Airborne na Rolling Spider (ụdị ndị gara aga). Njikwa a na aesthetics dị iche iche nwere ọystụ abụọ na nhazi nke bọtịnụ ihu abụọ nwere ike ịhazi, yana ihe anọ na-akpata. Ego ọ bụla (awa 2) ga-enye gị ihe ruru awa isii nke nnwere onwe. Mkpokọta arọ nke Icheku Flypad bụ 295, na ga-ekwe ka anyị na-agụnye anyị ama iji uru niile atụmatụ nke Icheoku FreeFlight Obere, ngwa ọhụrụ anyị na-eweta n'okpuru. Enwere ike ịzụta ya iche iche maka € 39.
Parrot Freeflight Mini, ngwa dakọtara
Ngwa ọhụrụ a nke icheoku na-eweta ga-enye anyị ohere ịchịkwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ niile nke obere obere anyị, tinyekwa mmegharị akọwapụtara na bọtịnụ ndị dị n'ime ime Icheku Flypad. Ọ nwere a pụtara mfe interface, anyị enweela ike ịnwale iji ya ma ọ bụ ihe magburu onwe ya. Otú ọ dị, anyị nwere ike iji Icheku Flypad na-enweghị ya, ọ bụ ezie na ọ ga-abụ mgbakwunye na anyị agaghị achọ ịla n'iyi, ebe ọ bụ na Icheoku Freeflight Obere Ọ bụ ugbu a na isi ngwa na-echekwa maka iOS na gam akporo ngwaọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Technology » Robotics » Parrot na-enye ụmụ obere ihe ọhụrụ ya, Swing na Mambo, anyị na-egosi gị ha
Google Maps na-agbakwunye ozi gbasara oke ọsọ mgbe anyị na-agagharị
Nwere ike ịzụta Pokémon GO Plus na Spain